एकता छिट्टै, रात रहे अग्राख पलाउँछ ः नेपाल - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
एकता छिट्टै, रात रहे अग्राख पलाउँछ ः नेपाल
Published On : १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १७:२९
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता छिट्टै हुनुपर्ने बताएका छन्। युवा संघ नेपालको २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रम तथा समृद्धि र सुशासनका लागि युवा अभियानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘पार्टी एकता छिट्टै गर्नुपर्छ, नत्र रात रहे अग्राख पलाय हुन्छ। असमझदारी कसले बढाइदिने हो थाहा हुँदैन। मिडियामा आएका कुराको पनि लाग्दा समस्या बिग्रिएका छन्। लेखिहाले पनि त्यसको पछि दगुर्नुभएन,’ उनले भने, ‘आज मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट भएको छ। उहाँले दस्तावेजमा समस्या छैन भन्नुभएको छ।’ पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक छिट्टै बसेर यो विषय टुंगो लगाउने पनि नेता नेपालले सुनाए।
पार्टी एकताका सन्दर्भमा स्पष्ट रहेको पनि नेता नेपालले सुनाए। उनले भने, ‘आज छलफल भएको छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी र म भेट्यौँ। भेटघाट सकारात्मक भयो। पार्टी एकताबारे हामीबिच कुनै समस्या छैन। पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सम्भवत: भोलि बस्छ। निकट भविष्यमै एकता हुन्छ र एकताले तरंग ल्याउँछ।’